उपभोक्ता सजक बनौं – News Portal
August 20, 2019 epradeshLeaveaComment on उपभोक्ता सजक बनौं
चाडपर्व मात्रै भन्दा अन्य विभिन्न समयमा पनि अनुगमन हुनुपर्छ । हामीले व्यवसायीले पनि विभिन्न समयमा सचेत गराउने काम गरिरहेका छौँ । बजारमा हुन सक्ने अखाद्य वस्तु नियन्त्रण र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि हामीले व्यवसायीहरुलाई पनि प्रशिक्षण गर्ने गरेका छौँ ।
कालोबजार भनेको विशेषगरी दुई प्रकारले हुन्छ । एउटा भनेको अभाव हुन सक्ने वस्तुहरुलाई लुकाएर मंहगो मूल्यमा बेच्ने हुन्छ भने अर्को खासगरी मापदण्ड विपरीत अखाद्य वस्तु मिसावट गर्ने । जसले गर्दा उपभोक्ताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा असर पार्ने गर्दछ ।
यि दुई किसिमले हुने कालोबजारी पछिल्लो समय हुने गरेको छ । उद्योग वाणिज्य संघले यी कुराहरुलाई मध्यनजर गरिकन विभिन्न समयमा सरोकारवाला सँगसँगै अनुगमनालाई पनि निरन्तरता दिने गरेको छ । चाडपर्वको समयमा विषेशगरी यस्ता क्रियाकलाप बढी हुनसक्ने भएकाले हामी सचेत छौँ ।
व्यवसायीलाई हामीले पटक–पटक भन्ने गरेको के हो ? भने गैह्रकानुनी काम जो कालोबजारीजस्ता कुरा नहोस् भनेर सचेत गराउने गरेका छौँ । उपभोक्ता पनि स्वयम् सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता चनाखो बन्नसके यस्ता कुराहरु धेरैभन्दा धेरै कम हुन्छन् ।
के खान मिल्ने, के खान नमिल्ने ? यस्ता कुरा थाहा नहुन सक्छ तर तपाईहरुलाई केही पनि कुरा शंकास्पद लाग्यो भने सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउनुभयो भने पक्कै पनि यस्ता कुरा निकै कम हुँदै जानेछन् ।
हामी स्वयम् व्यवसायी पनि उपभोक्ता हौँ, हामीले पनि आफैले के खान मिल्ने, के खान नमिल्ने आफै पनि मूल्याङ्कन, आँकलन गर्न सकिन्छ त्यसैले उपभोक्ताको अधिकारलाई हामीले नै सुरक्षित गर्न कसरी सक्छौँ भन्ने निकै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
बउपभोक्ता अधिकारमा खबरदारी